आज ह्वात्तै बढ्यो संक्रमित संख्या र मृत्यु दर।अब हुने भयो सबै बन्द? |
August 10, 2021 adminLeaveaComment on आज ह्वात्तै बढ्यो संक्रमित संख्या र मृत्यु दर।अब हुने भयो सबै बन्द?
नेपालमा आज पनि ठुलो संख्यामा थपिए नयाँ को-रोना संक्रमित, यति धेरैको मृ-त्यु, बितेको २४ घण्टामा को’रोना संक्रमितको तथ्यांक ह्वात्तै बढेको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार देशभर ४९०४ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।यसअघि सोमबार देशभर हजार ६५१ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार १९ हजार १२३ जनामा गरिएको परीक्षणमा ४९०४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै सोही अवधिमा ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने २११५ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।यससँगै देशभर को’रोना संक्रमितको संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा ७ लाख २० हजार नाघेको छ भने एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा ७१ हजार १९८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।
संक्रमितमध्ये हालसम्म ६ लाख ७३ हजार १९८ जना निको भएका छन् भने १० हजार १५० जनाको मृत्यु भएको छ । हाल देशभर ३७ हजार ३३२ जना सक्रिय संक्रमित रहँदा १७६ जना भेन्टिलेटर र ७६१ जना आईसीयूमा रहेका छन् । हालसम्म को’रोना निको हुने दर ९३.४ प्रतिशत रहेको छ।
गोकुल बास्कोटापछि नारायणकाजीको ठूलो काण्ड बाहिरियो, देशभर हंगामा (अडियो र भिडियोसहित)
अब घरमै बसी बसी पाउनुहोस् लाइसेन्स।यस्तो छ प्रक्रिया